Porto Rico: Momba Fampitam-baovao Tamin’ny Meday Volamena Azon’ny Ekipa Nasionaly Vehivavy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Novambra 2011 19:31 GMT
Sambany ny Ekipa Nasionaly Basketball Vehivavy ao Porto Riko no nandrombaka ny meday volamena nandritra ny fifaninanana Pan Amerikana natao tao Guadalajara, ao Meksika vao haingana, taorian'ny fandreseny an'i Meksika tamin'ny isa 85-67 nandritra ny lalao famaranana. Bilaogera sady mpanao gazety ara-panatanjahan-tena, Rafael Díaz Torres namoaka lahatsoratra mendrika tao amin'ny bilaogy Comentario Deportivo Boricua [es] izay itsikerany ny fandrakofan'ny gazety mahazatra itony hetsika manantantara itony. Azo an-dahatsary ao amin'ny youtube navoakan'ny mpisera theliontree ny fotoam-pandresen'ny ekipa vehivavy:
Ao amin'ny lahatsorany i Rafael no mametraka ny tsy maintsy hieritreretana indray ny fomba fieritreritsika ny vehivavy atleta ao amin'ny nosy:
Anisan'ny mpitondra ny faneva PortoRikana ireo vehivavy 12 ireo ary manandanja tahaka ny fandresen'ny ekipa nasionaly lehilahy PortoRikana ihany koa ny fandreseny. Tokony ho ampy handrisika antsika hanohy ny fandravana ny fanavakavahana ny fandresen'izy ireo. Mandrisika antsika hahatsiaro ny fomba nandraisantsika, sy nandalinantsika ary ny fomba nitantarantsika ny fanatanjahantena vehivavy noho ity meday volamena ity.
Nanamarika ireo fahasamihafana amin'ny fomba fanaovan'ny ekipa lehilahy sy ny ekipa ny vehivavy fanatanjahantena izy:
Manana fahazaran-dratsy isika rehefa mieritreritra “vehivavy” raha miresaka ekipa vehivavy basketball. Tsy misy izany ho an'ny ekipa lehilahy. Tsy rariny izany fomba fijerintsika izany ny amin'ny fandraisana ny lehilahy ho toy ny “Ekipam-pirenena” ary ny vehivavy ho toy ny “Ekipam-pirenena Vehivavy” kosa, sy ny filazana fa taranja ho an'ny lehilahy ny basketball, sady nolazaina tany am-boalohany fa ny lehilahy ihany no mandray anjara amin'izany.
Nitsikera ny zava-misy amin'ny gazety koa izy, mampiseho ny vehivavy atleta maromaro ho toy ny “sexy” malaza:
Izay nofantenina sy anatina sary mahalasa fisainana sy mihantsy (ohatra, sary tao amin'ny El Nuevo Día momba an'i Yarleen Santiago tamin'ny beach volleyball) dia tokony tsy azo ekena amin'izao taona 2011 sy amin'ny hoavy manaraka izao.
Farany, nilaza izy fa tokony hankalazaina tahaka ny atleta lehilahy ihany koa ny atleta vehivavy:
Tokony ampiharina amin'ny vehivavy vehivavy ihany koa ny fananana fihetseham-po hita amin'ny atleta lehilahy, ny vehivavy izay miatrika olana lehibe kokoa noho ny lehilahy, ny amin'ny firotsahany amin'ny sehatry ny fanatanjahantena na fifaninanana mba hahitana azy ireo ho manana fitiavana sy ezaka mitovy ihany koa.
Raúl Feliciano Ortiz, avy ao amin'ny Revista Cruce namoaka lahatsoratra momba izany lohahevitra izany izay nanehoany hevitra mikasika ny fitantarana ny ekipa vehivavy basketball raha oharina amin'ny ekipa lehilahy.
Raha mihevitra isika fa mitovy ny fandresen'ny lehilahy ny ekipa avy ao Etazonia tamin'ny taona 2004 [nandritra ny Lalao Olimpika tao Athènes, Grèce] ity fandresen'ny ekipa vehivavy ity, mety hahita isika fa lehibe dia lehibe ny tsy fitovian'ny fitantarana amin'ny fampahalalam-baovao. Raha nandresy ny ekipa USA ny lehilahy tamin'ny taona 2004, nisy ny fitantarana vaovao marobe , sehatra manokana ary indrindra sary lehibe natao tamin'ny gazetin'ny ekipa izay tsy tonga tany amin'ny atsasa-dalana akory anefa nandritra ny fifaninana Olaimpika. Nandrombaka ny volamena ny vehivavy mba hahazo fitantarana mitovy tahaka izany kanefa tsy nitovy akory ny fitantarana niseho.
Farany, maniry izy fa tsy ity ihany no medaily azon'ny ekipa vehivavy fa mbola ho marobe:
Inoako fa tsy ity medaily voalohany ity ihany , fa anisan'ny manova fijerin'izao tontolo izay an'i Porto Riko. Maro ny fambara tsara; manàna fanantenana fa tsy fandalovana fotsiny iny. Arahabaina!